Kismaayo News » Ingiriiska oo la wareegay xeebaha Soomaaliya
Ingiriiska oo la wareegay xeebaha Soomaaliya
Kn: Ciidamada Badda ee Yurub oo ku moorgaysta waxa ay ugu yeereen ilaalinta xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa hogaan kooda la wareegay dalka Ingiriiska.
Ciidamadan ayaa sida ay sheegtaan la dagaalama Burcad Badeedda laakiin Soomaalidu waxay ka aaminsantay inay meesha ku ilaaliyaan maraakiibta dalalkooda ee sida sharci darada ah u booba khayraadka xeebaha Soomaaliya isla markaana ku daadiyay qashinka kimikooyinka iyo suntan halista ah ama gufarka nukleerka.
Hogaanka ciidamada oo meerto lixdii biloodba uu dal reer Yurub ah caynaanka u qabto ayaa horay waxaa u hayay dawladda Talyaaniga. Dad badan oo Soomaali ah ayaa aaminsan in sheekada burcad badeeddu ay tahay filim lagu boobayo khayraadka dalka, dalalka moorgaysanayana uu midba markiisa rabo inuu kistiisa ka cantoobsado laakiin aan cidina u danaynayn Soomaaliya. In ka badan 15 sano oo ay ku andacoonayeen inay ilaalinayaan xeebaha Soomaaliya wali lama hayo hal qori oo Alshabaab u socday oo ay qabteen ama hal Markab oo si sharci daro ah u kaluumaysanayay ama sun ugu qubayay.
Dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dadaal dheer u gasho sidii ay u dhisi lahayd ciidan badeed ilaaliya khayraadka badda, maxaayeelay waxa badda kujiraa inaga badan inagoon u baahan shidaal iyo macdanta kale dhulka ku duugan.